နေ့ဘက်တွေမှာ ဟန်ဆောင် ဆန္ဒပြပြီး ညဘက် တွင် KTV မှာ သွားကဲတာကြောင့် အင်းစိန်ထောင်မှာ တစ်ညအိပ်ခဲ့ရဖူးတယ် ဆိုတဲ့ သံစဉ်မောင် – Shwe Likes
နေ့ဘက်တွေမှာ ဟန်ဆောင် ဆန္ဒပြပြီး ညဘက် တွင် KTV မှာ သွားကဲတာကြောင့် အင်းစိန်ထောင်မှာ တစ်ညအိပ်ခဲ့ရဖူးတယ် ဆိုတဲ့ သံစဉ်မောင်
G Shwe | May 5, 2021 | Celebrity | No Comments
ဘေဘီမောင် နဲ့ သံစဉ်မောင် တို့ ညီအစ် မနှစ်ယောက် ကိုတော့ အားလုံးသိ ကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ စကားပြောကြ မ်းတဲ့အတွ က် ပရိသတ်တွေ ဩချရတဲ့ အထိပါ ပဲနော်။ နောက်ပိုင်းမှာ နေဒွေးနှိပ်စက် ခဲ့တဲ့အကြောင်း Live လွှင့်ငိုပြ တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော် ပြန်ဖြစ် လာပါတယ်နော်။
ဘေဘီမောင် တို့ ညီအစ်မနှစ်ေ ယာက်ဟာ နွေဦးတော် လှန်ရေး တွင် ဟန်ဆောင် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာေ တာ့ မြန်မာပြည် အေးချမ်းပါစေဆိုပြီး ဘုရား၊ တရားတွေ ဆက်တိုက် လုပ်နေပြန် ပါပြီနော်။ ဖေဖော် ဝါရီလကုန်ပို င်းလောက်ကလည်း သံစဉ်မောင်တစ်ယောက် နေ့ခင်းဘက်တွင် ဟန်ဆော င်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ည ဘက်တွင် World Wide KTV မှာ သွားကဲလို့ အင်း စိန်ထောင်တွင် တစ်ညအိပ်ခဲ့ ရတာပါနော်။
အခုထိလည်း နေ့ဘ က်တွင် ဘုရား တရား လုပ်ပြပြီး ညဘက်တွင် ရှိသမျှ Bar တွေထိုင်ပြီး မြူးတူးပျော်ပါးေ နတာပါနော်။ နောက်ထပ် ကြားသိရတာကတော့ တခြားဘဲ နဲ့အတူနေတဲ့ အချိန်တွင် နေဒွေးက မြင်တွေ့သွားတာကြောင့်ရိုက်နှက်တာကို နှိပ်စက်ပါတယ် ဆိုပြီး ညီအစ်မနှစ်ယောက် မျက်ရည်ချူ ပြသွားကြတာ ပါနော်။ သူတို့ ညီအစ်နှ စ်ယောက် ကိုတော့ အကယ်ဒမီတ စ်ယောက်တစ်ဆု ဆီ ပေးသင့်နေပြီနော်….
ေဘဘီေမာင္ နဲ႕ သံစဥ္ေမာင္ တို႔ ညီအစ္ မႏွစ္ေယာက္ ကိုေတာ့ အားလုံးသိ ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ စကားေျပာၾက မ္းတဲ့အတြ က္ ပရိသတ္​ေတြ ဩခ်ရတဲ့ အထိပါ ပဲေနာ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနေဒြးႏွိပ္စက္ ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း Live လႊင့္ငိုျပ တာေၾကာင့္ ပရိသတ္​ေတြ ရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ျပန္ျဖစ္ လာပါတယ္ေနာ္။
ေဘဘီေမာင္ တို႔ ညီအစ္မႏွစ္ေ ယာက္ဟာ ေႏြဦးေတာ္ လွန္ေရး တြင္ ဟန္ေဆာင္ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္မွာေ တာ့ ျမန္မာျပည္ ေအးခ်မ္းပါေစဆိုၿပီး ဘုရား၊ တရားေတြ ဆက္တိုက္ လုပ္ေနျပန္ ပါၿပီေနာ္။ ေဖေဖာ္ ဝါရီလကုန္ပို င္းေလာက္ကလည္း သံစဥ္ေမာင္တစ္ေယာက္ ေန႕ခင္းဘက္တြင္ ဟန္ေဆာ င္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ည ဘက္တြင္ World Wide KTV မွာ သြားကဲလို႔ အင္း စိန္ေထာင္တြင္ တစ္ညအိပ္ခဲ့ ရတာပါေနာ္။
အခုထိလည္း ေန႕ဘ က္တြင္ ဘုရား တရား လုပ္ျပၿပီး ညဘက္တြင္ ရွိသမွ် Bar ေတြထိုင္ၿပီး ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါးေ နတာပါေနာ္။ ေနာက္ထပ္ ၾကားသိရတာကေတာ့ တျခားဘဲ နဲ႕အတူေနတဲ့ အခ်ိန္တြင္ ေနေဒြးက ျမင္ေတြ႕သြားတာေၾကာင့္ရိုက္ႏွက္တာကို ႏွိပ္စက္ပါတယ္ ဆိုၿပီး ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ မ်က္ရည္ခ်ဴ ျပသြားၾကတာ ပါေနာ္။ သူတို႔ ညီအစ္ႏွ စ္ေယာက္ ကိုေတာ့ အကယ္ဒမီတ စ္ေယာက္တစ္ဆု ဆီ ေပးသင့္ေနၿပီေနာ္….
မရေရာတဲ့ ဖြေရှင်းချက်အပေါ် ပရိသတ်များရဲ့ အားပေးယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပီ ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်
လေဆိပ်မှာ မထင်မှတ်ပဲအဖမ်းခံခဲ့ရသော်လည်း အခုချိန်ထိ လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိတဲ့ အကယ်ဒမီမျိုးသန္တာထွန်း
လှပလွန်းနေတဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေ နဲ့ ပြည်သူတွေ ချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ MISS သူဇာဝင့်လွင်
မြင်သူတိုင်း သဘောကျစရာကော င်းလောက်အောင် ကျက်သရေ ရှိရှိ လှလွန်းေ နတဲ့ MISS သူဇာဝင့်လွင်